Afar Khalad Oo Sergio Ramos Sameeyey, Tababaruhuna Ku Raacay Iyo Jamaahiirta Oo Ka Garaabay In Ronaldo Loo Darsaday? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Afar Khalad Oo Sergio Ramos Sameeyey, Tababaruhuna Ku Raacay Iyo Jamaahiirta Oo Ka Garaabay In Ronaldo Loo Darsaday?
(18-9-2018) Real Madrid ayaa lumisay dhibcihii ugu horreeyey ee xili ciyaareedkan, markii ay garoonka San Mames marti ugu noqdeen naadiga Athletic Bilabo.
Real Madrid ayaa qaybtii hore dhibaatootay, waxaana markii lagu soo noqday qaybta labaad uu tababaruhu degdeg garoonka usoo geliyey Casemiro oo safaro dhaadheer oo uu Maraykanka ugu baxay usbuucii hore kaddib u baahnaa nasasho, hase yeeshee, go’aan kale oo adag ayuu ka qaatay in uu soo geliyo Lucas Vazquez ama Mariano, waxaana uu ugu dambayntii doortay Vazquez.
Cayaartan, waxa laga diiwaangeliyey khaladaad tababare oo ah dhinaca xulashada ciyaartooyada safkiisa koowaad iyo beddelladii uu sameeyeyba, hase yeeshee khaladaadka ugu waaweyn waxa sameeyey difaacyahanka ahna kabtanka kooxda ee Sergio Ramos.
Kabtan Ramos ayaa waxa uu masuuliyad weyn isa saaray intii uu Cristiano Ronaldo ka tegay Los Blancos, afartii ciyaarood ee ay yeesheenna, waxa uu sameeyey waxyaabo amaba fursado aanu heli jirin intii uu Ronaldo joogay.
Haddaba, waxa ay shabakadda ciyaaraha ee Cadalool halkan idiinku soo bandhigaysaa far khalad oo uu sameeyey Ramos isaga oo garab ka helaya tababarihiisa, kuwaas oo u baahan in sixitaan degdeg ah lagu sameeyo.
Rikoodheyaasha: Sergio Ramos ayaa isaga oo haysta kalsoonida tababaraha waxa uu qaatay rikoodheyaasha oo loo daayey, waana fursadda koowaad ee uu ka helay bixitaankii Ronaldo.
Tababaraha Real Madrid, Lopetegui, ayaa waxa la aaminsan yahay inuu yahay shakhsi aan ka hor iman karin damaca iyo hoggaaminta adag ee Ramos, taas daraadeedna uu isaga iskaga sasabay.
Laadadka Xorta ah: Kulankii Athletic Bilbao iyo ciyaarihii ka horreeyeyba, laagga xorta ah ee ay kooxdu ka hesho agagaarka goolka kooxda kasoo horjeedda, waxa dul istaaga Ramos marka ay kubaddu dhinaca midig xigto, taas oo uu isku dayo inuu si toos ah u toogto goolka, halkii uu asxaabtiisa madaxa u saari lahaa.
Cayaartii Atletico Bilbao, waxa diilinta dusheeda loo dhigay laag xor ah, oo uu dusha mariyey.
Jamaahiirta iyo falanqeeyeyaasha ciyaaraha ayaa ku dooday in ay jiraan ciyaartooyo badan oo kaga wanaagsan laagga xorta ah oo ay tahay inuu tababaruhu kaalintan u xilsaaro. Toni Kroos oo ah halyey la ogyahay in laaggiisu toosan yahay, caanna ku ah inaanu danayste ahayn, ayaa waxa uu xaqiiqadii yahay laacib kaga fiican laagga tooska ah, hase yeeshee waxa iyaguna jooga Isco iyo Luka Modric.
Damaca gool-dhalinta: Isla marka ay kooxdiisu kubadda qabsato, Sergio Ramos waxa uu ka cararaa difaaca, waxaanu si toos ah u abbaaraa weerarka si uu goolal usoo dhaliyo.
Arrintani waxay dhibaato ku tahay kooxda oo si sahlan goolal loogaga dhalin karayo weerarrada rogaal-celiska ah, waxaanay tahay in tababaruhu uu u sheego Ramos inuu ku koobnaado difaaca.
Taariikh raadin: Sergio Ramos waxa uu doonayaa inuu rikoodho dhawr ah ku galo taariikhda kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxaana ka mid ah gool-dhalinta iyo guulaha koobabka.
Waa dhab inuu haddaba ku qornaan doono taariikhda dahabiga ah ee Real Madrid, waxayse tahay in tababare Lopetegui uu u sheego kabtankiisa, in uu horeba u galay rikoodhka diiwaanka naadiga ee uu hadda muujiyo degganaan iyo damaca shakhsiga ah oo uu yareeyo.
Tababare Lopetegui, ayaa ay khubradu tusaale ugu soo qaateen inuu kabtankiisa xasuusiyo, in ciyaartooyadii difaaca ahaa ee Beckenbauer oo Bayern Munich ahaa iyo Baresi oo AC Milan ahaa ay rikoodhka kooxahooda, isaguna uu sidaas oo kale ahaan doono, balse masuuliyadda kaligii uu isku koobayo uu la wadaago asxaabtiisa.